မေတ္တာ ဇာနည် ~ Nge Naing
Tuesday, September 21, 2010 Nge Naing 10 comments
နှလုံးသား ရှိသူတိုင်း ခံစားတတ်စေရန် Fact နှင့် ခံစားမှုကို ပြန်လည်ကူးယူ စုစည်း ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်က အာဂါတ အငြိုးတွေကို မီးပွားများရန်မဟုတ်၊ ဒီလို ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်လှတဲ့ အဖြစ်မျိုး နောင်လာနောက်သားတွေ မခံစားရဖို့အတွက်ဆိုရင် ဒီခေတ်ဒီစနစ်ကို မပြောင်းလဲဘဲနဲ့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ နအဖ အခုလုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ အတုအယောင် ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်လာရင် ဒီထက်ပိုဆိုးဦးမယ်ဆိုတာကို သတိတရားများဝင်ကာ ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းနိုင်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး အမှတ်တရ စုစည်းတင်ပြပါတယ်။ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးမှာ အသက်ပေးသွားကြသော၊ လက်ရှိအကျဉ်းကျနေသော ရဟန်းရှင်လူအားလုံးကို အလေးပြုလိုက်ပါတယ်။ စာသားက ကိုကလိုစေးထူးပို့စ် ဖြစ်ပြီး ဗွီဒယိုတွေက Google Youtube မှ ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်က ဓါတ်ပုံကို မင်းဓမ္မ မှကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်။
ဗွီဒယိုကို ဤနေရာ မှကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်။
ဗွီဒယိုကို ဤနေရာမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်။
၀တ္တုတိုကို ကိုယ်တိုင်ရေးမတတ်လို့ ကိုကလိုစေးထူးရဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်အပေါ် ခံစားရေးဖွဲ့ထားတာကို ထပ်တူခံစားပြီး ကူးယူဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဆုတောင်းကလည်း စာရေးသူနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှပါပဲ
Posted in: ၀တ္ထုတို,ဓါတ်ပုံ,ဗွီဒီယို,မှတ်တမ်း
September 22, 2010 at 12:41 AM Reply
လာရောက်ဖတ်ရှု့ သွားပါတယ်အမရေ...စာအရေးအသားကကောင်းကောင်းဓါတ်ပုံလေးနဲ့ ဆိုတော့ ...တခုခုခံစားမိပါတယ်အမ...
September 22, 2010 at 10:34 AM Reply
ကိုစေးထူးရဲ့ စာလေးကို ဖတ်ပြီး ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ရင်း မျက်ရည်တွေ ထိန်းမရဘူး။ လူမဆန်တဲ့ အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ နေကြရတဲ့ တို့ မြန်မာတွေ အဖြစ်ဆိုးလိုက်ကြတာ..။
'လူအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ´
`တို့မေတ္တာစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း၊ အေးချမ်းကြပါစေ´
September 22, 2010 at 11:44 AM Reply
ဂျူလိုင်ဖြူနဲ့ မမိုးချိုသင်း ရင်ထဲက ခံစားမှုတွေ ဆုတောင်းတာတွေက အတူတူပါပဲ။ ဒါတွေကို ဘယ်သူမှ ဘာမှ မပြောတော့ဘူးဆိုရင် ဘယ်သူ ဘယ်တုန်းက ဘာမတရားလုပ်တဲ့တယ်ဆိုတာ နောင်လာနောက်သားတွေ ဘယ်သူမှ မသိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
September 22, 2010 at 12:34 PM Reply
မျက်ရည်တွေအလိုအလျှောက်ကျလာတယ်အမရယ်။ ဘယ်အချိန်ပြန်ကြည့်ကြည့် မနေ့ ကလိုပါဘဲ။
အရာအားလုံးဟာ မျက်စိရှေ့ မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လေ။ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါဘဲ။ မျက်စိရှေ့ မှာ သံဃာနဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ အသတ်ခံ ခဲ့ရတယ်။ သွေးသံတရဲရဲနဲ့ ။ အရိုက်ခံခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ရတယ်။ သေနတ်က ဘယ်မှာ မိုးပေါ်ထောင်ပစ် လို့ လဲ။ တကယ်ကို တည့်တည့် ပစ်တာနော်။ မြို့ လယ် ကောင်မှာ လူအုပ်ရဲ့အရှေ့ မှာ စစ်သားတွေ၊ အနောက်မှာ စစ်ကားက ရောက်လာပြီး နေရာဖြန့်ကျက်ယူပြီး လက်လှမ်းမှီရာ အကုန်လုံးကို ရိုက်နှက်။ တည့်တည့်ကိုပစ်တာ။ ကံကောင်းလို့ သာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဆေးကုယူခဲ့ရတယ်။
September 23, 2010 at 4:20 PM Reply
အယောက် ၁၀၀..မှာ..၁ ယောက်သာလျှင်.ကြိုးစားပြီး
ဗဟုသုတကြွယ်ဝသူဖြစ်တယ်။ကျန်သော ၉၉ ယောက်သောဒီမိုအများစုကတော့အလွန့်အလွန် ကို ညံ့
September 23, 2010 at 5:51 PM Reply
ဘယ် Political Analyst က ပြောလိုက်တာလဲ ခြင်္သေ့ ဒါမှမဟုတ် ခြင်္သေ့ကိုယ်တိုင် Research လုပ်ထားလို့ ရတဲ့ Experiment Result တော့ ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး။ အဲလို ကိန်းကဏန်း အတိအကျနဲ့ ပြောတယ်ဆိုတာ Research အထောက်အထားနဲ့ဆို ကြိုက်သလို ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါတောင်မှ ၁၀၀% မှန်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ အများစုကိုပဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ထင်ရာကိုယ် ကြိုက်သလို ပြောလို့ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီအတိုင်း ကိုယ်ထင်ရာ ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားကအခြေအမြစ်မရှိတဲ့အတွက် သူများကို ထိခိုက်နေရင် စော်ကားရာရောက်သလို အဆင့်အတန်းမရှိ အတင်းပြောရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ ပြောတဲ့သူကလည်း ဘယ်လောက်ပဲ ဗဟုသုတ ရှိရှိ အဆင့်နှိမ့်သွားတယ် ဆိုတာ ခြင်္သေ့သိရဲ့လား။ အဲဒါကြောင့် အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ စကားတွေကို သိပ်မပြောပါနဲ့လို့ ခြင်္သေ့ကို အကြံပြုပါတယ်။
September 24, 2010 at 3:22 AM Reply
မြန်မာမုန့်ဟင်းခါးရည်က ဆီလက်တစ်ဆစ်လောက်တတ်နေတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး...မစားဖူးလို့ပဲဖြစ်မယ်...
September 24, 2010 at 9:42 AM Reply
[URL="http://zachariahqp.qipim.ru/mayl-ru-sputnik.html"]Майл ру спутник[/URL]
September 25, 2010 at 1:33 AM Reply
Anonymous - ကျွန်မ ငါးနဲ့ချက်တဲ့မုန့်ဟင်းခါး အကုန်လုံး မစားဖူးတာ မရှိဘူး။ အကုန်လုံးကိုလည်း ကြိုက်တယ် အဲဒီထဲမှာမှ ထိုင်းမုန့်ဟင်းခါးကို အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်က မုန့်ဟင်းခါးဆိုရင် ရခိုင်မုန့်ဟင်းခါးကို အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ မြန်မာ မုန့်ဟင်းကို စားရင်လည်း အချဉ်နဲ့ အစပ်ကိုပဲ အဓိကထည့်တယ် အကြော်နဲ့ စားခဲတယ်။ မြန်မာမုန့်ဟင်းခါးမှာ ဆီလက်တဆစ်လောက် ရှိမရှိဆိုတာက အသားထွင်ပြီး ပြန်ကြော်ထားတဲ့ ငါးမှာ စိမ့်ဝင်နေတဲ့ ဆီက ဟင်းအိုးထဲရောက်ရင် အပေါ်ကိုတက်လာတယ်။ ဒီဆီကို ခပ်ထုတ်မပစ်ရင် အပေါ်မှာ လက်တဆစ်လောက် ရှိနေတယ်။ အတော်များများက နှမြောလို့ဆိုပြီး မခပ်ထုတ်ပစ်ကြဘူး။ အဲဒါကို ပြောတာဖြစ်တယ်။ အဆီအအီ မကြိုက်တဲ့သူတိုင်း ဗမာအစားအစာစားထက် ထိုင်းအစားအစာကို ပိုကြိုက်တာ မဆန်းပါဘူး။
I couldn't read your comment. If you translated it into English, I'll be able to read it. If you can do it, that'll be great. Thanks for visitting my blog.
September 26, 2010 at 9:01 AM Reply
ဆီပုံးမှာလည်းရေးသူမရှိ။ ကော်မန့်မှာလည်း ရေးသူမရှိနဲ့။ စိတ်တောင် မကောင်းပါလားကွာ :P